/blog/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Mgbasaozi Mmetụta Ị ga - achọ izere
Ihe na 04 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na Boldenone.
Ihe niile banyere Garcinia Boldenone Undecylenate
1. Gịnị bụ Equipoise (Boldenone Undecylenate)
3. Equipoise (Boldenone Undecylenate) mmetụta
4. Equipoise (Boldenone Undecylenate) Ogwu na Ụdị
5. 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) mmetụta ndị ị ga - achọ izere
6. Equipoise (Boldenone Undecylenate) ihe nchịkọta anụ ụlọ
8. Ebee ka esi nweta Boldenone?
Gịnị bụ Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Equipoise(Boldenone Undecylenate) bụ testosterone ewepụtara anabolic-androgen steroid (AAS) nke nọ na ahịa kemgbe 1940s. E nwere ọtụtụ Bertenone esters gụnyere Boldenone Cypionate, Boldenone Acetate.
N'okwu mmeghe, ndị na-agwọ ọrịa na-eji ya eme ihe nanị ruo mgbe e mesịrị na 1950 mgbe Ciba gosipụtara ọkwa ụmụ mmadụ. Ndị nchọpụta mepụtara nkwadebe maka inyinya n'ọgụ iji mee ka agụụ na-agụ ha ka mma nakwa dịka ụbụrụ ahụ na-agbanye.
Ndị na-arụ ọrụ na-eji ya eme ihe na-enye obi ụtọ site na njedebe dị egwu nke onye steroid a juru. Iji gbakwunye na nke ahụ, ọ pụtaghị nkwụsị mmiri ebe ọ bụ na ọ dịghị ebe maka anya ọjọọ ahụ.
Ọ dị na ngalaba ahụike ruo 1970s mgbe e wepụrụ ya. N'ịbụ onye dị mkpụmkpụ, ọ dị naanị site na ndị veterinarians na ahịa ole na ole. O nwere ụfọdụ aha ahia gụnyere Bold-one, Boldoject, Boldane, Boldebolin, Equigan, na Equidex n'etiti ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị bodybuilders na-agbalị iji tụnyere Deca na Equipoise. Ma ndị steroid bụ ihe kachasị na njide nke ahụ ike nakwa dị ka ike mmadụ si enweta. Ha mezuo nke a site na mmụba nke njikọ protein. Otu n'ime esemokwu dị iche iche bụ na ndị ọrụ Deca ga-agbaso usoro nlekọta usoro nlezianya na-esite na ya n'ihi ụbụrụ estrogen kpatara.
Ụfọdụ n'ime ọgwụ ndị bodybuilders na-eji PCT eme ihe bụ Nolvadex, Clomid, na Arimidex. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere ọtụtụ ndị na-eji ahụ ike na-eji eji Equipoise eme ihe. Ihe ọzọ dị na Deca bụ na ọ na-anọ na usoro nke ya maka oge dị ukwuu. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịnwale ahụ dị mma n'ahụ gị ruo ihe dị ka afọ abụọ, ndị na-eme egwuregwu na-anwale mgbe nile na-ahọrọ iji Equipoise. Oge ịchọpụta ihe dị ka ọnwa ise.
Mgbe ọ na-abịakwute mmetụta ndị na-enweghị nkwenye na nkwonkwo na-adabereghị na nkwonkwo vs. deca, nkwadebe na-eburu ụbọchị. Eji mara nke ọma iji kpatara orrogenic utịp dịka otutu, ntutu ihu, na ntutu isi mgbe Deca na-ejikọta na njide mmiri na gynecomastia.
Deca bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị na-achọ nnukwu mgbe a na-ejikarị ngwa ngwa iji belata oge usoro. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị na-eji jiri nkwonkwo iji egbutu ya n'ihi na ọ na-enye nsonaazụ zuru oke.
Iji kwuo ya niile, Equipoise enweta ịhụnanya buru ibu site n'aka onye ọ bụla n'ihi ngwa ngwa kama ọ na-enweta ya mgbe ọ na-enye ya ike na ike na oke na-enweghị nsogbu gị site na mmetụta nke estrogenic mmetụta. O nwekwara ike ịbụ akụkụ nke ogologo oge. Tụkwasị na nke a, Equipoise na-eti Deca aka mgbe ọ na-abịa n'ịkwalite mmepụta ọbara ọbara na mkpali nke agụụ.
Boldenone Undecylenate na-ekekọrịta ụfọdụ myirịta na testosterone mgbe ọ na-abịakwute mmelite nha. Ma ndị steroid bụ nnukwu mmeri ma nwee ike:
Nitrogen njigide na-eduga na uto ma ọ bụ na njide ya njide.
Belata ọnụ ọgụgụ nke hormones glucocorticoid
Ịkwụsị glucocorticoids na-eme ka nsị nke ndị na-edozi ahụ dị ka ihe amino acids. Nke ahụ pụtara na ma testosterone ma kwadoro nwere ike belata usoro nke catabolic nke metabolism.
Site na Mbelata nke homonụ glucocorticoid, oge ị ga-ewe iji nwetaghachi mgbe ị na-emega ahụ ga-ebelata.
Meewanye IGF-1 mmepụta
Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF-1) na-enyere aka mụta nwa na ntanye mkpụrụ ndụ n'ime ahụ. N'ihi nke a, enwere ike ịkpụ akwara na mgbochi nke mgbu ahụ. Kwadoro na testosterone mekwuo mmepụta nke IGF-1 nke na-akwalite ozububu.
Mee ka njikọ protein ahụ dịkwuo mma
O doro anya na ndị na-edozi ahụ bụ otu n'ime akụkụ ndị kasị mkpa n'ahụ ahụ. Ha bụ ihe na - eme ka ahụ too ma ọ bụ gbanwee. Mgbe enwere ntinyekwu protein na ahu, enwere ike imezi ahu na mmezi ihe. N'ihi ya, otu onye nwere ike ịmị ike ma ruo ogologo oge.
Ọdịdị dị mma nke anụ ahụ pụtara na ozugbo i buliri arọ karịa arọ ndị ị na - eji; ị ga-agbake ngwa ngwa n'ihi na usoro nrụzi ga-aka mma.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) mmetụta
Mmetụta nke boldenone undecylenate ijis na bodybuilding
N'agbanyeghị itinye mgbalị niile ị na-eme n'ụlọ mgbatị ahụ, ọ dịbeghị? O nwere ike ịbụ nkụda mmụọ na mgbe ị rụsiri ọrụ ike na ntụrụndụ ahụ, ị ​​ka na-etinyebeghị pound na mọzụ gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ bụla nwere ike inyere gị aka n'ịgbasa ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na nke ọma, mgbe ahụ, m ga-agwa gị ihe nzuzo ahụ.
Ị na-eche ihe a na-eji eme nkwenye na-enweghị atụ? Mgbe ahụ, ị ​​hụbeghị mmetụta na-emenye ụjọ nke na-eme ka nkwenye na-enweghị atụ na-apụta. Ọ bụ ezie na ọ na-ewe oge ụfọdụ, steroid a na-enye onye ọ bụla aka ịnweta ụkwara akwara n'ụzọ dị ịtụnanya. Nyochaa Boldenone na Deca Durabolin ma ọ bụ Anadrol, nsonaazụ nke boldenone agaghị adị ngwa ngwa.
Ihe dị na ya bụ na uru ndị ahụ na-adịte aka ma ọ bụghị n'ihi nkwụsị mmiri. Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị mma ma bụrụ okwu obodo ahụ, Boldenone Undecylenate bụ ụzọ ị ga-esi gaa.
Mee ka agụụ ka njọ
O nwere ike ịbụ na ị maara na ị gaghị enwe ike ịmalite ikpo ọkụ gị ma ọ bụrụ na ị naghị eri ya. Dịka ụlọ chọrọ ihe zuru ezu, akwara chọrọ carbohydrates, amino acids, na ndi na-edozi na ha ka ha too. N'ụzọ dị mwute, ihe ka ọtụtụ n'ụbụrụ na-amaghị otú e si eme nke a.
Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịgwa onye na-arụ ọrụ na ya ka ọ rie ma ọ dịkarịa ala otu puku calorie ọzọ na-eme kwa ụbọchị iji mekwuo uru. Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ ọbụna karịa.
Nke ahụ bụ nri dị ukwuu nye onye ọ bụla, ọtụtụ ndị nwere ike isiri ya ike ọbụna iri na ọkara. Ị nwere ike ịnwe ihe mgbaru ọsọ nke iwepụ calorie ndị ọzọ naanị iji chọpụta na ị na-ama jijiji n'ihu gị ọbụna hụ mgbanwe dị n'ikike gị. Ozi ọma ahụ bụ na otu n'ime boldenone na-eji na-arụ ọrụ ozuzu bụ iji mepụta agụụ dị ala na-enyere gị aka imeri ihe mgbaru ọsọ gị.
Site na nkwenkwe na-edozi ahụ na-adịghị mma, ị ga-ahụrịrị mgbanwe dị mkpa na gị agụụ. N'ihi ya, ị nwere ike iri nnukwu calorie na protein dị ka ịchọrọ. Iji ọtụtụ carbs ga - eme ka ọnụ ọgụgụ nke glycogen dị na sel gị nwere ike ime ka i nwekwuo ume mgbe ị na-eme mgbatị ahụ. N'ihi ya, ị ga-enwe ike ibuli ibu karịa ka ị na-ebuli n'oge gara aga. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ahụ na-eme egwuregwu na ndị na-egwu egwuregwu na agụụ na-agụ mgbe nile na-achọ maka boldenone undecylenate.
Ike bụ ihe na-eme ka nha. Gbalịa ma leghara ike nweta ma ị ga-achọpụta na ahụ ike gị anaghị enweta ihe ị chọrọ ka ha bụrụ.
Ịbawanye ike bụ otu n'ime nkwenye nke boldenone na-arụ ọrụ na bodybuilding. Ọ na-eme ka ikike nke mmadụ dịkwuo mma karịsịa nke na-eme ka usoro mgbasa ozi na-emepụta ihe. Ihe mara mma na ya bụ na ọ na-akwalitekwa ime egwuregwu.
Site n'inwekwu ike, ị ga-enwe ike ịme ihe ndị ọzọ na-enweghị mmetụta ọ bụla na ị na-ata onwe gị ahụhụ. Ị nwere ike ịkọrịrị ihe nke a ga-eme. Ọzụzụ ọzọ pụtara na ị na-enwezi akwara.
Ntucha bụ otu n'ime mmasị Boldenone kachasị amasị ya na bodybuilding. Ọ na-adịkarị n'etiti ndị na-ahụ maka ozu na ndị na-asọmpi na-achọ igbuchapụ abụba na-eleba anya ngwa ngwa.
Boldenone Undecylenate bụ steroid nke na-egbu egbu bụ nke na-echebe ndị na-ahụ maka ahụ ike. Ozugbo ị mara otú e si agba ọsọ na mgbatị, ọ ga-eju gị anya na ị ga-atụfu abụba a na-achọghị ma ọ bụrụ na ị ka nwere ike ịkwa ahụ. Gị Boldenone n'ihu na mgbe foto ga-abụ ihe akaebe na ị bụ onye dị iche.
Iji kpoo abụba, ị ghaghị inwe kaadị calorie. Ọ pụtara na ị ga-akpọkwu calorie karịa ndị ị na-eri. O di nwute, calorie deficit nwere ike ime ka ị ghara ịkwa ahụ dịka ahụ mmadụ na-agba mbọ imeju ọchịchọ ahụ. Ezigbo nri nwere ike ichebe gị site na nke a, ma ọ nwere ike ghara inwe obi ike.
Iji zere uru ahụ, ị ​​gbalịsiri ike inweta; ị nwere ike ịhọrọ ịkwadebe. Ọ bụghị naanị na ọ ga-echebe ahụ ike gị dị nfe site na ọnwụ ma ọ nwekwara mmetụta dị mma n'ụdị ahụ gị.
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ozu na-eji ya na-aga n'ihu na-aga ebe ọkpụkpụ nke ọnwụ ma kwụsịrị n'oge ọkara ọkara n'ihi na ọ nwere ike ịkpata mmetụta nke estrogenic.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Ogwu na Ụdị
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Oge
Ụlọ ọrụ na-eme nke ọma n'ịdị irè dika ị nwere ike iji ya ma ọ bụ tinye ya na ndị ọzọ Anabolic Steroid. The steroid ị na-ahọrọ na-adabere na ihe ị chọrọ iji nweta.
E nwere ike ịhazi usoro usoro mmemme dị ka ndị a:
Ndị na-amalite ịmalite-Ọ bụrụ na ị na-eji Equipoisefor nke mbụ, a na-atụ aro ka ị were 300-500mg nke Testosterone Enanthate / Cypionate na 400mg nke Equipoise kwa izu. Ọdịdị nke mmalite ga-agba ọsọ maka izu iri na anọ. Na oge a, onye ọ bụla na-amalite nwere ike ịghọta oke ego nke uru na oke muscle.
Ọkwa ọkwa - Ọ bụrụ na ị kwenyere na ị nwetara ọkwa ahụ dị n'etiti ọkwa na ọ kabeghịkwa otu esi agba ọsọ Equipoise, ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole; Mee ka gi na ya kwadebe Dianabol na usoro onu ogugu nke 25mg kwa ubochi maka ihe dika otu ruo izu anọ. Maka mmezi, a na-amụba usoro ọgwụgwọ na 400-600mg kwa izu. Ogologo oge nke oge a ga-agba ọsọ bụ izu iri na abụọ.
Ọkwa dị elu - A gwara ndị nwere ahụmahụ ka ha weghaara Boldenone Undecylenateat usoro ihe dị ka izu iri na abụọ n'izu nke 600mg kwa izu. Trenbolone Enanthate nwere ike ịbụ onye kasị mma steroid iji dochie ya na onyonyo nke 400mg kwa izu.
A pụkwara ịhazi okirikiri mmemme dịka ihe mgbaru ọsọ si dị. Lee ụzọ abụọ a;
Mbelata ihe na-emetụ n'ahụ nwere ike ịdị ka nke a;
Dianabol -30mg kwa ụbọchị enyere site na izu 1 ruo izu 8
Egwuregwu - 600mg n'izu ọ bụla e kenyere site na izu 1 ruo izu 12.
Boldenone maka igbutu ọnwụ:
Winstrol-35mg kwa ụbọchị e nyere site na izu 1 ruo izu 8
Egwuregwu - 500mg n'izu ọ bụla e kenyere site na izu 1 ruo izu 12
Ụdị ahụkarị Boldenone na Testosterone nwere ike ịdị ka nke a;
Kọkọrọ Ọnụọgụ ọgwụ Duration
Equipoise 400mg / izu 15 izu
testosterone Enanthate 500mg / izu 15weeks
Nke a bụ ihe ọzọ nwere ike ị ga - esi kwadebe ngwa ngwa;
izu Turinabol Equipoise Testosterone cypionate Nolvadex
1 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
2 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
3 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
4 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
5 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
6 50mg kwa ụbọchị 400mg kwa izu 500mg kwa izu
7 400mg kwa izu 500mg kwa izu
8 400mg kwa izu 500mg kwa izu
9 400mg kwa izu 500mg kwa izu
10 400mg kwa izu 500mg kwa izu
11 400mg kwa izu 500mg kwa izu
12 400mg kwa izu 500mg kwa izu
13 500mg kwa izu 20mg kwa ụbọchị
14 500mg kwa izu 20mg kwa ụbọchị
15 20mg kwa ụbọchị
16 20mg kwa ụbọchị
17 20mg kwa ụbọchị
18 20mg kwa ụbọchị
19 20mg kwa ụbọchị
20 20mg kwa ụbọchị
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Ọgwụgwụ
Iji zere nhụjuanya site na egwu mmetụta, ịkwesiri ịgbaso nduzi kwesịrị ekwesị. Cheta usoro dị elu nke ị na - eme, nke ka ukwuu ị na - eche na nsogbu sitere na mmetụta estrogenic na - aghọ. Ọzọkwa, ị kwesiri iji usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị ka ị ghara ichefu uru.
Dịka otu, Boldenone Undecylenate dosage ranges na 200-400 mg kwa izu. Maka ụmụ nwoke, a na-anabata ọgwụgwọ nke 400mg na ọ bụ usoro kachasị nta kachasị ọtụtụ n'ime ha ga-ahọrọ ime. Ụfọdụ na-aga maka 600mg n'ihi na ọ dị mma nke ọma nakwa mmetụta dị iche iche nke ihe nrụpụta dị mma.
N'iji echiche kwadoro 'ogologo oge, ọtụtụ ndị ikom na-enye onwe ha / na-ejikwa otu ọgwụ ahụ kwa izu. A pụkwara ikewapụta usoro ọgwụgwọ Boldenone Undecylenate n'ime abụọ ma ọ bụ atọ dị nta. Ogologo oge ndụ Boldenone Undecylenate na-enye ohere maka usoro nhazi oge ọzọ na mmetụta ndị ọzọ nwere ike ijide.
Maka ụmụ nwanyị, ụbụrụ Boldenone Undecylenate ahụ bụ 50mg kwa izu. Site na usoro onu ogugu a, imeghi ocha di obere, mana uche ya ga-adabere na onye ahu. Ụfọdụ ndị inyom nwere ike ịnagide usoro 75-100mg, ma a dụrụ gị ọdụ ka ị ghara ịmalite inwe usoro ọgwụgwọ ahụ ruo mgbe ị kwenyesiri ike na ahụ gị dị mma na 50mg kwa izu.
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) n'akụkụ emetụta gị'll chọrọ izere
Mmetụta dị iche iche nke Equipoise adịghị dị ka ndị siri ike dị ka ndị na-akpata steroid ndị ọzọ. Ndị maara otú ha ga-esi na-akwadebe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ naghị adịkarị mkpesa banyere mmetụta ọ bụla.
Ọ bụ ezie na enwere akụkọ banyere Boldenone Undecylenate nwere ike ịtụgharị aka na estrogen, ọ na-eme n'oge na-adịghị anya. Arụ ọrụ estrogen nwere ike ịdị elu karị mgbe ị na-atụle nkwonkwo vs deca, ma ọ bụ ọkara nke testosterone.
Iji belata oke mmetụta, ị kwesịrị ị na-eji usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ịmalite na ụbụrụ kachasị ala ma mee ka ọ dịkwuo ka ahụ gị na-agbanwe. Mgbe ị na-eme nke a, ịnwere ike ịnwale n 'uche gị dị na steroid a.
Ọ bụrụ na ịchọta mmetụta dị ka ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ ala, ogho acha uhie uhie n'ime ọnụ ma ọ bụ imi ma ọ bụ n'ahụ ahụ, nhụjuanya ọkpụkpụ, ịgba ọbara, ihe dị iche iche, ire ire, ọgbụgbọ, uru dị arọ, ire ire, ihe nhụjuanya ọbara ọgbụgba ma ọ bụ ụra / nwa / ọkụ na-acha ọbara ọbara na-achọ enyemaka ahụike.
N'oge na mgbe ị gachara, I nwere ike ịta ahụhụ site na mgbochi testosterone. Mbelata nke mmepụta nke testosterone gị nwere ike ịnweta mmetụta dịgasị iche iche.
N'ime nnyocha e mere na oke rabbits, ịmịnye ha na Equipoise mere ka mmebi mmepụta dị omimi karịsịa mmebi nke testosterone. Ọ bụghị nanị na mmepụta nke testosterone ha na-ebelata kama ọkwa ha dị na stella.
Ihe ka ọtụtụ ndị nwoke na-arịa ọrịa si na leptin concentration. Ụdị nke testosterone nwere ike ịdalata n'ụzọ dị ịrịba ama mgbe ịmịchara mbụ.
Ọrụ mmekọahụ rụrụ arụ
Nkwado nwere ike imetụta gị MGBE ndụ na-ezighi ezi n'ihi nkwanye testosterone na estrogen dominance na ọ na-abịa. O nwere ike belata nkwanye gị, ma ị nwere ike ịnwe nsogbu ịmalite inwe mmekọahụ iji nwee mmekọahụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ime ka gynecomastia makwaara dị ka ndị mmadụ, ọnọdụ nke nwere ike ibelata ùgwù onwe gị. Ọ dịghị nwoke chọrọ ka nwanyị ha hụ na ha nwetara mmadụ n'ọnọdụ ebe ike ahụ siri ike.
Nke kachasị njọ, akwụkwọ ndụ gị nwere ike ịda mbà, nke a nwere ike ime ka ị ghara ịdị na-atụ ala na enweghị ntụkwasị obi. N'iji ugwo ugha, ị ga-ejide n'aka na ịzụ ụmụaka nwere ike ịbụ ezigbo mgba.
Oily spotty akpụkpọ
Ebe ọ bụ na ụbụrụ anabolic na androgenic, Boldenone nwere ike inye gị ọdịdị ahụ na ogo nke ịchọrọ mgbe niile ma n'otu oge ahụ gbakwunye àgwà nwoke dị ka otutu na akpụkpọ anụ.
Ụlọ ọrụ na-eme ka mmepụta mmanụ na-emepụta mmanụ nke na-ejikọta ya na breakouts. Ọtụtụ n'ime ha, ihe otutu ahụ na-eme n'ihu na azụ. O di nwute, iji ocha ihu wee belata ha nwere ike buru ihe efu n'ihi na enwere otutu n'ime orrogenic na ahu.
Akụrụ na imeju imeju
Ngwá ọrụ nwere ike iduga mmebi ahụ, mmetụta na-emetụta ya bụ mgbanwe nke nha, ọdịdị, na arụ ọrụ nke akụrụ. Nke a na - eme ma ndị nwoke ma ndị inyom ma na - eme ka eziokwu ahụ bụ na steroid a bụ androgenic.
N'ime nnyocha e mere na ụmụ anụmanụ, oke rabbits e ji eme ihe na-egosi ihe mgbaàmà nke hepatic (imeju) na mmebi akụrụ (akụrụ). Otu ihe ahụ na-eme ụmụ mmadụ, nke a nwere ike ịkwado site na nnyocha nke dị na Journal of Sports, Medicine-and Physical Fitness.
Ụmụ nwanyị na-azụlite àgwà nwoke
Ụmụ nwanyị ndị na-akwadebe ahụ nwere ike ịnata ahụhụ. Ihe nke a pụtara bụ na ha nwere ike ịhụ na ha amalitela ịzụlite àgwà na atụmatụ ndị na-eme naanị n'ime ụmụ nwoke. Dị ka ọmụmaatụ, ha nwere ike nweta oke ahụ ike ha na-achọ, ma n'otu oge ahụ na-eto eto na-achọghị ihu na ihu. Ụmụ nwanyị anaghị achọ afụ ọnụ na ha, nke a nwere ike bụrụ nkwụsị.
Iji gbakwunye na nke a, ndị inyom na-eji ngwaọrụ nwere ike ịfufu ụfọdụ akụkụ nke ụmụ nwanyị ha, enwekwuo mmeso ọjọọ ma nwee mmetụta dị omimi karị.
Mee ka cholesterol mụbaa
E jiri ya tụnyere ndị ọzọ anabolic steroid, kwadoro poses bụ mmetụta dị nfe na usoro obi. Otú ọ dị, e nwere ohere nke onye na-ata ahụhụ site na mmetụta ọjọọ na ọkwa cholesterol nke otu. Dịka ndị ọzọ androgenic steroid ọ pụrụ ibelata HDL gị (cholesterol dị mma) ma bulie LDL (cholesterol ọjọọ)
Iji gbochie nke a, debe nri kwesịrị ekwesị site n'iri ihe oriri dị mma ma gbakwunye ihe omume gị na usoro ọzụzụ gị.
Ịmepụta na Equipoise nwere ike ime ka ị nwee ọrịa obi. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na iji ya eme ihe nwere ike ibute ọnọdụ dị ize ndụ.
Ngwá ọrụ nwere ike ime ka nwoke ahụ nwee ntụpọ ma mee ka ndị mmadụ na-ebutebeghị ya ka ha taa ahụhụ.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) ihe nchịkọta anụ ụlọ
Boldenone Ntụziaka maka nri mmiri steroid bụ dị ka ndị a
EQ 300mg / ml Ntụziaka maka 100ml
62.5ml mmanụ grapeseed
Benzyl Mmanya 2ml (2%)
Boldenone cypionate bụ ester dị mkpụmkpụ karị ma e jiri ya tụnyere onye na-enweghị atụ. Boldenone Cypionate ọkara ndụ dị nnọọ ogologo oge ma nwee ike ịchọpụta cypionate nke nwere ike ịga ruo otu afọ na ọkara. N'ihi nke a, Boldenone Cypionate usoro onunu ogwu na-etinye aka n'inwekwu ọtụtụ ugboro. Ka a sịkwa ihe mere na ndị na-enweghị mmasị na injections anaghị eji Boldenone Cypionate steroid. Akarị Boldenone Cypionate onunu ogwu di n'etiti 100-150mg kwa ml.
A na-eji Broidenone Cypricate steroid mee ihe iji na-emeso ịnyịnya iji nyere ha aka ịgbakwunye ibu dị iche iche nakwa ịkwalite uwe ha na ntutu isi.
Boldenone Acetate a maara dị ka Equipoise nke na-adịghị eme ihe bụ onye steroid nke nwere ụdị ester dị iche na ya. A na-ejikarị ya eme ihe n'ịgba ịnyịnya, mana ndị ahụ na-ahụ ya n'anya Boldenone Acetate uru karịsịa na-adabere na muscle uka. Ngwá ọgwụ Boldenone Acetate bụ 400-800mg weere otu ugboro n'izu.
Boldenone Acetate homebrew uzommeputa (ndepụta)
Ntụziaka nke Boldenone Acetate;
2% Benzyl Mmanya 2ml
100g Boldenone Acetate ntụ ntụ 80ml
Boldenone Cypionate homebrew uzommeputa (ndepụta)
Na Boldenone Cypionate uzommeputa mejupụtara;
1ml Benzyl Mmanya
15ml mmanụ ọka
Ebee ka esi nweta Boldenone?
Dị ka onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-egwu egwuregwu, ị na-ele anya mgbe niile maka ihe ga-etinye gị n'elu egwuregwu gị. N'ọtụtụ mba, Otú ọ dị, ojiji nke Anabolic Steroid a machibidoro, ọ nwere ike siere gị ike ịnweta ha. Ka o sina dị, ị nwere ike ịnweta ha n'ụzọ dị mfe site na ebe nrụọrụ weebụ. Ịzụta ịntanetị na-enweta uru ndị ọzọ gụnyere usoro ịzụ ahịa na-adịghị mma.
Na ịntanetị, ị nwere ike ịgụkwu banyere steroid ị chọrọ ịzụta. Dịka ọmụmaatụ, ebe ị nwere ike ịgụ banyere nchịkọta Boldenone Acetate, Boldenone Cypionate homebrew, ihe Boldenone ji mee ihe na ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịma banyere ya. Site na oge ị kpebiri ịzụta ya, ị gafeelarịrị ihe niile gbasara ya. Na ime ka ọ bụrụ nke enweghị nchekasị maka gị, ozi a niile dị na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ gị.
Ụlọ ahịa na-ere ahịa mgbe ọ bụla e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa anụ ahụ. Ọnụ ego Boldenone ga-abụ ọnụ ọnụ ala n'ịntanetị n'ihi na ị ga-enwe mmetụ ka mma. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịnweta ego maka ịzụta nnukwu. Ònye na-enweghị mmasị ịchekwa ego ọzọ?
Ị maara na ị nwere ike ịzụta Boldenone n'amaghị ama na-enweghị onye ọ bụla maara banyere ya? Na ịntanetị, ị ga-esi zere ọtụtụ ajụjụ ndị ị nwere ike iche na ọ bụ ntakịrị ihe ihere. Naanị gị na ụlọ ọrụ ahụ maara ihe dị na ngwugwu gị ma onye ọ bụla ọzọ ga-ahụ uru ahụ na-egwu.
The Boldenone maka ire ere bụ nke kachasị mma ma ọ gaghị emechu gị ihu. Ọ naghị edozi ya, ọ gaghị etinyekwa ahụ ike gị n'ihe ize ndụ. AASraw na ebe nrụọrụ weebụ ziri ezi nke na-emepụta ngwaahịa ya na steeti ihe eji eme ihe. Ị nwere ike ijide n'aka na Boldenone maka ire ere ga-enye gị ihe ị chọrọ.
Ị nwekwara ike ịzụta nkwadebe maka ịnyịnya. Zụrụ ya taa, ị ga-enwekwa obi ụtọ karị.
Equipoise (Boldenone Nndecylenate Injection) Akwụkwọ nchịkọta na ụzụ, 1-9 peeji nke
Nyocha Steroid, nke Hugh LJ Makin, DB Gower dere, peeji nke 815-823
Nchịkọta ahụike nke ọgwụ ndị na-abụghị ọrịa antimicrobial ọgwụgwọ ọgwụ ọjọọ na-eri na nri, nke JackF dezie. Kay, James D. MacNeil. Jian Wang, peeji nke 193
Masteron Enanthate Na Longer Na - eme Androgenic Anabolic Steroid (AAS) Otu esi choputa ndi nwere uzo uzo di na 12 Steps